चीनको इतिहासमा युद्धमा थोरैले धेरैलाई पराजित गरी विजयोत्शव मनाएका धेरै उदाहरणहरु छन। ती मध्ये तीन राज्यकालताका छ पि भन्ने ठाउँमा "आगो लगाएर शत्रुहरुलाई हराएको कथा"चिनियाँहरुमा व्यापक रुपमा प्रचलित छ। किनभने त्यसमा आजसम्म पनि मानिसहरुलाई रोचक र तर्कयुक्त प्राचीन कथाहरु समावेश छन।
ईस्वी सम्वत दोस्रो शताब्दीको अन्त्यतीर शासनाधिकार केन्द्रिभूत गर्ने पूर्वी हान् राज-वंश पतनशील अवस्थामा पुग्यो र लामो समयसम्म युद्ध सरदारहरुका बीच युद्धको गंजागोल स्थितिमा छाउ छाउ, लिउ पै र सुन छ्युआनले क्रमश: मध्य चीन, पा शु र च्याङ तुङ क्षेत्रमाथि कब्जा जमाएमा थिए। ती मध्ये छाउ छाउ निकै शक्तिशाली थियो। सन् 208मा छाउ छाउले दक्षिणतीरको युद्ध अभियान शुरु गरे। परिणामस्वरुप लिउ पैलाई पराजित गरी महत्वपूर्ण सैनिक क्षेत्र चिङ चौका अधिकांश क्षेत्रलाई आफ्ना हातमा पारे। यसले गर्दा लिउ पैले वाध्य भएर आफ्ना सेनाला२ स्याआ खौ अर्थात अहिलेको हु पै प्रान्तको हान् खौमा तैनाथ गरे। एकैमुष्टमा लिउ पैलाई सखाप पार्ने छाउ छाउको कुचेष्ट थियो। यसका अतिरिक्त, सुन छ्युआनको अधीनमा रहेको च्याङ तुङ क्षेत्रलाई पनि गाभिने योजना उनले गरे। त्यसैकारण लिउ पै र सुन छ्युआनले संयुक्त रुपमा छाउ छाउको प्रतिकार गर्नथालेका थिए। त्यस बेला छाउ छाउले दुइ लाख भन्दा बढी सैनिकहरुको नेतृत्व गरी च्याङ लिङ"अर्थात अहिलेको हु पै प्रान्तमा पर्ने ]"नदीको बाटो हुंदै पूर्वतिर लम्कंदै गएर स्या खौसम्म पुगे। सुन छ्युआन र लिउ पैका संयुक्त सेनाका पचास हजार जना सिपाहीहरु नदीको प्रवाहको विपरित उत्तरतीर गएका थिए र छ पी "अर्थात अहिलेको हु पै प्रान्तको छ ची पहाड "मा दुइ पक्षका बीच मुटभेड भयो। छाउ छाउका सैनिकहरु सबै उत्तरी क्षेत्रका बासिन्दाहरु भएका कारण जल-युद्ध गर्ने क्षमता नभएकाले लडाईंको शुरुमा हार खाएका थिए । त्यसैले छाउ छाउ पछि हटेर नदीको उत्तरी क्षेत्रमा बसेका थिए। छाउ छाउ र सुन छ्युआन तथा लिउ पैको संयुक्त सेनाका बीच नदी थियो। उनीहरु नदीको वारिपारि मुखामुख भएर बसेका थिए। छाउ छाउले हार खाएपछि आत्मसमर्पण गरेको चिङ चौका जनरल छाइ माउ र चाङ युनलाई उत्तरी क्षेत्रका सिपाहींहरुलाई जल युद्धको शैली सिकाउन आदेश दिए र त्यस क्रममा केही उपलव्धि पनि हासिल भयो। सुन छ्युआनका लागि सेनाको निर्देशन गर्ने सेनापति चाउ युले छाय माओ र चाङ युनको तालिम पाएर छाउ छाउका सेनाले जल-युद्धको कुशलता हासिल गरेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। त्यसैले चाउ युले कलहको बीउ छर्नखोजेका थिए। छाउ छाउले चाउ युको षडयन्त्रमा परेर छाइ माओ र चाङ युनमाथि आफ्नो सेनामा लुकिबसेका जासूस भएको दोष लगाएर दुबैजनालाई मारिदिएका थिए।
लिउ पैका सैनिक सल्लाहकार चु क ल्याङसित छलफल गर्दा छाउ छाउका सैनिक र घोडाहरु धेरै बढी भएको र कडा शासन पनि भएको कारण प्रत्यक्ष रुपमा लडाईं गरेमा सु छ्युआन र लिउ पैको संयुक्त सेनाले विजय पाउने सम्भावना नभएको महसूस चाउ युलाई लागेको थियो। त्यसैले उनीहरुले आगो लगाएर हमला गर्ने निर्णय गर्नुका साथै अनेकन् जुक्तिहरु पनि निकालेका थिए। एक दिन, चाउ युले छाउ छाउमाथि हमला गर्ने कुरा बारे छलफल गर्न भनी आफ्ना जनरलहरुलाई बोलाएका थिए । छाउ छाउको शक्ति ठूलो भएकाले आत्मसमर्पण गर्दा बेस हुने सल्लाह वृद्ध जनरल व्हाङ काइले दिए। चाउ युले क्रोधित भएर व्हाङ केलाई पचास पटक लट्ठीले हान्ने आदेश दिए। व्हाङ केले पिटाइ खाएपछि आत्मसमर्पण गर्न भनी छाउ छाउलाई खबर दिन मान्छे खटाए। व्हाङ केले साँच्चै नै आत्मसमर्पण गर्ने विश्वास छाउ छाउले गरेका थिए र यसले उनलाई निकै खुशी तुल्याएको थियो। यस बेला एकजना प्रसिद्ध सैनिक विशेषज्ञ फाङ थुङ पनि छाउ छाउसित भेट गर्न आएका थिए। छाउ छाउले खुशी भएर फाङ थुङसित एक जटिल समस्या बारे सोधपुछ गरेका थिए। छाउ छाउका सिपाहींहरु उत्तरी क्षेत्रका मानिस भएका कारण उनिहरुले जल युद्ध गर्न नजानेका र दक्षिण क्षेत्रको हावापानी नफापेका कारण उनिहरु बारंबार विरामी परेका थिए। फाङ थुङले यस बारेमा जवाफ दिंदै भनेः "यो के गाह्रो छ ? साना ठूला जहाजहरु राम्रोसँग मिलाएर तीस वा पचास वटा जहाज एकै लस्करमा बाँधिएमा, फलामे सिक्रिद्बारा बाँधिदिएर माथि काठे फल्याक बिछ्याए सब ठीक भैहाल्छ।"छाउ छाउले यस अनुसार जहाजहरु एकै लस्करमा बाँधिदिए। साँच्चै, ती जहाजहरु अब हल्लिएनन, सिपाहींहरुले ती जोडिएका जहाजमा अस्त्र प्रयोग गर्दा पनि जमीनमा जस्तै अनुभव भएको थियो र उहाँलाई रिंगटा पनि लागेको थिएन। छाउ छाउलाई खुशी लाग्यो। तर सल्लाहकारले भनेका थिएः" युद्धपोतहरु एकै लस्करमा जोडिएर हलचल नभए तापनि विपक्षीले आगो लगाएर आक्रमण गर्न आएमा भाग्न गाह्रो हुने नै छ।"तर छाउ छाउले यो कुरा सुनेर खित्का छोडेर हाँस्दै भनेः"चिन्ता नगर्नुहोस, हामी उत्तरी दिशामा छौं, उनीहरु दक्षिणी दिशामा छन्। अहिले जाडो याममा उत्तर-पश्चिमी दिशाबाट मात्र हावा आउँछ र दक्षिण-पूर्वी दिशाबाट हावा आउँदैन। उनीहरुले आगो लगाएर आक्रमण गरेमा आफैले आफूलाई जलाएका होइन त ?"छाउ छाउको कुरा सुनेर सबै मानिसले उनी बुद्धिमान भनी प्रसंसा गरेका थिए। त्यसैले सबै मानिसहरुको बुद्धि गुमेको थियो ।
कसैको कल्पनामा पनि यो कुरा सोचेको थिएन, तर नभेम्बर बीस तारिखका दिन अकस्मात दक्षिण-पूर्वी दिशाबाट हावा चल्नथाल्यो। लिउ पैका सैनिक सल्लाहकार चु क ल्याङमा जल-वायुको अनुमान गर्नसक्ने क्षमता भएकाले चाउ युसँगै युद्धको तयारी गरिसकेका थिए। त्यस बेला छाउ छाउले व्हाङ केको पत्र पाए र आत्मसमर्पण गर्न आउने कुरा पनि मिल्यो। छाउ छाउले जनरलहरुलाई लिएर जहाजको शिर भागमा उभिएर पर्खिरहेका थिए। नभन्दै छाउ छाउले एक दर्जन जति जहाजका साथै व्हाङ के जल प्रवाहको बहाइमा आउँदै गरेको देखे। यो देखेर छाउ छाउलाई ज्यादै खुशी लाग्यो । ती एक दर्जन साना जहाजहरु हावाको गतिमा चांडै नै छाउ छाउका जंगी जहाजनेर आइपुगे। यसै बेला व्हाङ केले हात हल्लाउँदासाथ ती साना जहाजहरुमा दन्दनी आगो लाग्यो। जहाजमा पराल र तेल जस्तो प्रज्वलनशील पदार्थ मात्र थियो। आगो लागेका ती साना जहाजहरु छाउ छाउका जंगी जहाजको लस्करमा पसे । छाउ छाउका जहाजहरुलाई फलामे सिक्रीव्दारा एक लस्करमा बाँधिएकाले भाग्न पनि नसकी तुरुन्तै आगोको सागरमा डुबेको जस्तो देखियो। छाउ छाउ तुरुन्तै जहाजबाट ओर्लेर किनारमा गए। किनारमा भएको अन्न भण्डारमा पनि चाउ युलका लुकिराखेका सिपाहींद्बारा आगो लगाइयो। सुन छ्युआन र चाउ युको संयुक्त सेनाले मौका छोपेर हमला गरे। छाउ छाउका सेनाले हार खाए र छाउ छाउ पनि अन्योलको अवस्थामा परेर घेराबन्दीबाट भाग्दै उत्तरी क्षेत्रमा फर्केका थिए।
छ पीमा उक्त संग्राम भएपछि छ्युआनले याङ सी नदीको दक्षिणी क्षेत्रमा आफ्नो शासनलाई सुदृढ गर्न पाएका थिए । लिउ पैले मौका छोपेर चिङ चौका धेरै भागलाई आफ्ना हातमा लिएका थिए । यसले गर्दा छाउ छाउ , सुन छियुआ , लिउ पै गरी तीनै पक्षले मुखा मुख भएर बसेको स्थिति देखा परेको थियो । छ पी भन्ने ठाउँमा आगो जलाएर शत्रुलाई धपाउने बारे अरु धेरै कथा पनि प्रचलित भएका छन् । उदाहरण होः व्हाङ केले चाउ युको कुटपिट खाएर छाउ छाउका सामु नकली आत्मसमर्पण गरेको कुरालाई "　शरीरलाई दुःख दिने　दाउपेज "पनि भनिएको छ । फाङ थुङ चाहिं लिउ पैका सैनिक सल्लाहकार चु क ल्याङका मित्र हो । उनले छाउ छाउलाई फलामे सिक्रीव्दारा जहाजलाई जोडिदिने प्रस्ताव राखेकोले छाउ छाउका सेनाका जहाजहरुमा आगो लागेर भाग्न नसकेका थिए । यस जुक्तिलाई "फलामे सिक्रीव्दारा जहाज जोडिने जुक्ति"पनि भनिएको छ।